“Kaleessa ummanni Oromoo mana hidhaa yoo guurramu,ummanni Oromoo yoo dararamu hundi keenya eessa turre?”Pireezidaant Lammaa Magarsaa – Kichuu
HomeAfaan OromooVideos“Kaleessa ummanni Oromoo mana hidhaa yoo guurramu,ummanni Oromoo yoo dararamu hundi keenya eessa turre?”Pireezidaant Lammaa Magarsaa
WBO’n!Hin Shakkiin Jabaadhu!!!#FINFINNEETTI
WBO’n Taankii fi Xiyaaranuu sodaattu sanatti boombii aaraa darbatti Salphoon!
Barri olii gadii silas
በወጣቱ ትግል ከቃልቲ ማጎሪያ ነፃ የወጣው እስክንድር ናጋ ዛሬም በቄሮ ላይ የጀመራውን የጥላቻ ዘመቻ ቀጥሎበታል፡፡
ከሁን በፊት በ twitter ገፁ
ይለያል ዘንድሮ” ብሎ መዛቱን እናስታውሳለን
ኢትዮጲስ ጋዜጣ ኦሮሞ ክልል የሚባል ከየት አምጥተው ነው፡ ኦሮሞ ክልል የሚኖሩ ቄሮዎች እያለ የሚቃዣው?
ONN LIVE: TV Gaaddisa Dhugaa Sadaasa 04 2018 Sirna Simannaa Jiila ABO I/A HD
J/Araarsoo Biqilaatiin durfamu baha Oromiyaa Magaalaa DADARItti gaggeeyfamee ture.
New Caalaa Bultum Bifolle 2018/2019
“Kalessa ummaanni oromoo yeroo mana hidhaatti daraarama fi ajjeefama ture essa turan” jedhe Lammaan Magarsa jecha akkaasi OPDO irraa dhagahun garuu bayyee tokko nama salfaachisa.
Kan oromoo cabsee TPLF jala galche gola oromoo keessa deemte qabsa’oota oromoo funaansifte ajjeessisa turte OPDO’n dha. har’a garuu ofii qulqulluu of goote qulqulluu xureessuuf bolli OPDO’n hin seenin hin jiru.” dhugaan awaalamus rirmi hin yaatu”Shame on you #OPDO_OPD.
Obbo Lammaa Magarsaatu kana jedhe.
Inni har’a na qabaa na gadhiisaa jedhu kaleessa ummanni Oromoo waggaa 27 guutuu mana hidhaatti dararamu eessa ture?Salphina keenya kan ta’u yoo O romoon Oromoo dhiigseedha, rakkoo keenya kamuu akkuma waadaa keenyaatti mariin furanna.Kan wal waamne wal waraanuf miti cancala ummata Oromoo irraa hiikkachuuf mari’achuuf malee.
Haala amma keessa jirru ODP miti ABO miti ummanni Oromoo mataasaa irratti hasawuu , mari’atuu qaba.Abbootiin Gadaa kan gorfamuu qabu gorsuu qabu.
Nuti kan barcumaarra teenye maqaa dhuunfaa keenya qabannee miti ,maqaa ummata Oromoo qabanneeti.Yoo nuti cabne Oromootu caba.
Har’a injifannoo harka keenya hin seenne wal saamuuf hojjenna taanaan hunda keenyatu wal qabannee hallayyaa seena.
Guyyaa tokko Oromoon haa hiikkatu jennee hin beeknu akka hiikkatus hin feenu.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa haala nageenya naannicha keessa jiru hanga gandi keenya diigamu,daandiin cufamu obsa obsaa oliin yoona geenyeerra.
Garuummoo Mootummaan seera kabachiisuun dirqama qaba namni seera cabse yoomiyyuu ni gaafatama.Kan nuti qabsoofneef Oromoon seera yoo cabsu akka hin gaafatamnee miti ummanni keenyaa haqummaan walqixxummaan akka jiraatu malee.
Dubbii amma ta’aa jiru teenyee ilaalurraa teenyee mari’achuu qabna.Yoo teenyee mari’annee haaqa jiru walitti himnee dhimmi kun hanga dhimaatti ni hiikkata.Nuti ilmaan Aabbaa Gadaa jalatti guddanneedha teenyee mari’annee rakkoo mana keenyaa hiikkachuu qabna.”